Ugboro ole ka ịchọrọ iji gbaa ịnyịnya ígwè n’elu ugwu n’abalị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ugwu igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Ugwu igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Ugboro ole ka ịchọrọ iji gbaa ịnyịnya ígwè n’elu ugwu n’abalị?
Ọ dabere n'ezie n’ọsọ gị. O nwere ike ịbụ na ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ nwere ike ịdị mma n'ihe dị ka 200lumensopekempe; ezigbo bụ ihe dị ka 250-400lumens. Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịgba ọsọ ngwa ngwan'abalịmanaanyịchọta ihe ọ bụla n'elu 400lumensanaghị enyere anyị aka ịga ọsọ ọsọ mana ọ na-ere ndụ batrị ọsọ ọsọ.
Doddy: N’anya anwụ adaala apụtaghị na ị ga - akwụsị ịnyagharị ugwu. Ihe ị chọrọ bụ ezigbo ọkụ na igwe kwụ otu ebe gị ma pụọ. Nke a bụ usoro ọrụ GMBN maka ọkụ na ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịkwọ ụgbọala abalị.
Ọ dị mma, ihe mbụ na mbụ. Kedu oriọna ndị ị kwesịrị ịzụta? Ọfọn, ọ na-agbadata na isi ihe abụọ ebe a, ihe mmefu ego ị nwere na ihe ị ga-eji ya. Ka anyị gakwuru onye mbido ebe a.
Ọ bụrụ na naanị njem, eg. B. site na A ruo B, mgbe ahụ ịchọghị nnukwu ọkụ azụ, a ga-ahụ ha.
Ikwesighi ịhụ. Ọkụ USB dị ka obere iyi ndị a sitere na Lezyne zuru oke. Nchaji na-ewe ihe dị ka awa 2.5 ma dị ihe dị ka awa 20.
Ọmarịcha, mana ị gaghị ahụ ha. Nhọrọ gi nke ozo bu igbanwe nfe oku di nfe kari. Nke a sitere na Lezyne ma nwee 800 lumens.
N'ezie, ọ na-enye ìhè dị ịtụnanya na ọ na-aba uru maka obere ụzọ iji ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-aga otu ịnyịnya, ị nwere ike ịnwe ụdị ihe a. Ọ bụrụ na ọ bụ oge izizi ị na-agba ịnyịnya n’abalị, ọ bụghị iwu na ị ga-apụ apụ.
Ihe na-esote bụ ọkwọ ụgbọala na-adịghị ahụkebe. Maka njem niile dị n'okporo ụzọ, anyị na-akwado ihe ọ bụla karịrị 1,000 lumens. Echegbula banyere ihe na-erughị na, ị dị nnọọ ga-ahụ ihe.
Enwere ọtụtụ onyinye dị ọnụ ala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọọ n'ịntanetị, ị ga - enweta ezigbo ego. Nke a, nestling, ụdị ọ bụla ọ bụ, zụtara ya n'ịntanetị maka £ 18 n'egbughị oge, na-eri 1,400 lumens.
Na tiori zuru oke ọkụ iji malite ịnya ụgbọ ịnya ụgbọ gị n'abalị. Agbanyeghị, enwere m mmetụta ntakịrị, enwere ike ijide ya. Have nwere batrị dị iche na igwe kwụ otu ebe, nke bụ adịghị ike ebe ọ bụ na eriri ndị ahụ dị mfe.
Ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu, M na-eche na ala na odori batrị n'ihi na amaghị m ihe ọ bụla banyere ika. Enwere m ike ịgba ya n'ime ite, mana ị gaghị agọnahụ na £ 18 maka lumen 1,400 bara ezigbo uru ma baa ezigbo uru. Maka njem oge ụfọdụ, ọ ga-adị mma ka ị mee njem otu.
Bikelọ ahịa igwe kwụ otu ebe nwere ike ịhazi ya ma ọ bụ enwere ike ịnwe otu igwe kwụ otu ebe. Lelee ntanetị, na Facebook, maka ihe ndị dị ka ebe ị nwere ike ịhụ otu iji soro gị. Ihe dị mkpa banyere ya bụ na ọ bụrụ na inwetabeghị ịzụ tọn ihe ị ga-eji na-anya abalị, ọ dị mfe isoro ndị ọzọ kerịta ya.
Nwere ike iji 800 gaa 1,000 lumens pụọ ma kesaa ọdọ mmiri nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala ọzọ nwere. Ọ bụrụ n ’ịrapara n’etiti ndị ọkwọ ụgbọ ala abụọ nwere nnukwu ọrụ ọkụ dị arọ, ị nwere ike ịnwe ezigbo ahụmịhe n’ezie. I nwedịrị ike ikpebi ma ịchọrọ itinye ego na oriọna ndị ka mma.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị gị, ọ bụ egwuregwu dị iche iche. Ga-adị nnọọ njikere. Ikwesiri inwe bọlbụ mapụtara, ịchọrọ ọkụ ọkụ, ịchọrọ ezigbo mma, bọlbụ dị ike ka ị wee hụ ihe ị na-eme maka ebumnuche doro anya.
Ma ọ dịkarịa ala, m ga-asị na ịchọrọ 2,000 lumens. Ìhè dị ka nke a sitere na Exposure na-enye lumens 2,000 ma ị ga-anọdụ ala na ya ọilyụ ruo ọtụtụ awa. O nwekwara njirimara akpọrọ mpiaji na n’ezie ọ ga-ama elu ruo 3,100 lumens.
Ọ nwere wuru-in accelerometer na-achọpụta mgbe ị na-akwọ ụgbọala ngwa ngwa ma ọ bụ na ike ike teren. Nweta osisi gbasaa. Ọ na-enye gị ọtụtụ ọkụ ọkụ karịa.
Mgbe ị na-akwụsịtụ nwayọ ọzọ ma ọ bụ kwusi mgbe ị na-akwọ ụgbọala ka ị gaa ezumike, ọkụ ga-agbanyụ iji chekwa ndụ batrị. Nke a bụ kemgwucha mara mma maka na ọ dị mfe ịhapụ ọkụ gị n'otu ntọala wee gwụchaa. I nwekwara ike ịchọta ha na ụfọdụ oriọna ndị toro eto na ihe ngosi ikanam na azụ.
Ha dị oke nkenke ma gwa gị oge ole ị ga-anọ na ụgwọ batrị a. N'ikpeazụ, enwere onyinye hardcore. Ọ bụrụ n’ezie ị chọrọ ịkwọ ụgbọala otu ụzọ dị n’ọchịchịrị dị ka ị na-eme n’ụbọchị, ị ga-achọ nnukwu ọkụ dị ike.
A na-akpọ onye a, dịka ọmụmaatụ, Mpempe isii, ọ na-enye 4,750 lumens, ezigbo ezigbo lumens kwa. Agara m ụlọ ọrụ ebe ndị a na-eme oriọna ndị a. Ihe ihe a nwere ike ime bụ ara.
Ejikwa ya na teknụzụ Reflex a na-echekwa ọkụ eletrik ma na-enye gị nnukwu ọkụ mgbe ịchọrọ ya. Nke ahụ pụtara na ị gaghị ewepụ aka gị na ogwe ahụ iji dozie mmepụta nke ọkụ ahụ n'onwe gị. Ga-achọkwa ezigbo ọkụ maka okpu agha gị.
Abụọ-akụkụ usoro, ị nwere na na ogwe, gị isi ọkụ ihu. Enwerekwa ọtụtụ ntụpọ mgbe ị na-arị ma na-apụ n'osisi nke ọkụ okpu agha bara uru n'ezie. Okwesighi ka o buru ibu ma ọ bụ sie ike. 1,500 lumens bụ naanị ihe ị chọrọ.
Na-enwu gbaa ka mma, nri? Mba, mba mba, obughi ya. Ọkụ gị na-enwu maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ doro anya iji chekwaa batrị.
Ike batrị bụ enyi gị mgbe ị na-anya ụgbọala n’abalị n’ihi na ị nwere ike ịkwọ ụgbọala ogologo oge ma ọ dị mma. Na mgbakwunye, anya gị nwere ike imeghari na ọkụ gị karịa ka ị nwere ike iche. Ọbụna ọkụ nwere 4,750 lumens ọ bụ ihe ịtụnanya otu ị si eji ya ọsọ ọsọ.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka ọ naghị adịcha mfe dịka ọ dị mgbe ị malitere ịkwọ ụgbọala. Jiri ntọala nke ìhè gị mgbe ị na-anya ụgbọ ala na-esighi ike ma ọ bụ ikekwe ị nọ n'okporo ụzọ ụkwụ. Jiri ntọala tinye iji chebe ndụ batrị.
Mgbe ị hụrụ ụzọ siri ike na ọsọ ọsọ, kwụ ụgwọ ya n'ụzọ zuru oke ma ọ dị oke mma. Chee echiche banyere ihe nana gị gwara gị mgbe ị na-eyiri jaket gị n'èzí n'ime ụlọ: 'You gaghị enweta uru ahụ mgbe ị na-apụ n'èzí, ị ga-enwe?' Njem abalị ekwesịghị ịdị oke ọnụ. Onye ọ bụla na-eche na ọ bụ, mana n'eziokwu, nke ahụ abụghị eziokwu.
O kwere omume, dịka m gosipụtara, iji nweta ọkụ dị otú ahụ maka ihe na-erughị £ 20. lumen 1,400 maka ihe dị ka kilogram 20, ha na-ekwu na ha anaghị ekpuchi ihu igwe, nke ahụ bụ obere ahịa. Ekwesịrị m ịsị na agaghị m atụ anya ka ha nọrọ ogologo oge.
Enwere ọtụtụ isi ihe ha nwere ike ịda, ọtụtụ ebe eriri ndị ahụ na-apụta, ọ dị ka ọ dị nwayọ. Agbanyeghị, ịnweghị ike ịgọnahụ na nke a bara nnukwu uru maka ego ma ọ bụrụ na naanị ihe ị chọrọ ime bụ ịnwale ịgba ịnyịnya abalị iji hụ ihe ọ dị na ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị mma. Mgbe njehie ahụ mere ọ na - adị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ogo dị elu, ọkụ a pụrụ ịdabere na ya nke ga-arụ ọrụ kwa afọ, ọ na-efu gị ego ahụ. Ugbu a Exposure na-enye oriọna ihe karịrị $ 400, nke dị ka nnukwu ego, mana ihe ị na-akwụ bụ ogo nrụpụta na ọrụ ahịa ahịa. Ha abụghị ọkụ ọkụ.
Nke a bụ ọkụ ị ga-enwe ọtụtụ afọ na-abịa. Okwu dị iche. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu banyere ihe kpatara ọkụ ha ji pụọ iche, lelee isiokwu ndị dị na nkọwa dị n'okpuru.
M gara lee otú ha si eme ọkụ. Teknụzụ mara mma. Dị ka ndị ọzọ nke igwe kwụ otu ebe na ugwu gị, ịkwesịrị ilekọta ọkụ gị.
Karịsịa, lelee ụfọdụ ihe atụ m nwere ebe a. Otu n’ime oriọna ndị a nwere batrị dị n’èzí. Nke ahụ pụtara na ihe mbụ ị ga - eme bụ ijide n'aka na ị na - ebugharị eriri USB n'ụzọ zuru oke nakwa na ọ bụghị nke ọma na ọ gaghị ewepụ ya na mberede.
Ga-achọ ilelee ọnụ ndị a. Gbaa mbọ hụ na ha dị ezigbo mma, na mmiri anaghị abanye, na ị naghị adọpụ ha n’ìhè ahụ. Ihe ọ bụla nwere ike ime ka ha daa.
Leekwa ezigbo njikọ ahụ. Jiri onye na-ehicha kọntaktị, mmanya isopropyl eletriki. Gbaa mbọ hụ na iwepụghị mmiri ka mmiri gbochie gị.
Ọbụna ọkụ dị ka nke a nwere ike ịnọ ogologo oge ma ọ bụrụ na ejiri nlekọta lekọta ya. A na-elekwa ọkụ ndị dị oke ọnụ anya ka elebara anya dị ka ọnụ ala dị ala. Ikwesiri ịkwụ ụgwọ ha dịka onye nrụpụta tụrụ aro.
Nwere ike ịgba ụgwọ ọtụtụ oriọna ụbọchị ndị a, mana ụfọdụ oriọna ka na-akwado ka ị hapụ ha tupu ha agbapụta. Naanị lelee ya ma ị ga - enweta ndụ batrị kachasị na ha. Ọtụtụ n’ime ha na-adụkwa gị ọdụ ka ị ghara ịna-ebo ha ebubo zuru oke.
Ya mere lelee nke a dịka o doro anya na enwere ike ịnwe ogologo oge n'etiti ojiji. Lelee ya tupu njem mbụ gị n'ihi na ọ bụrụ na batrị gị nwụrụ anwụ ị gaghị achọta maka ya maka ihe dịka nkeji 20 ọ ga-agbanyụ. Ugbu a, e nwere ụzọ ọkụ abụọ dị mkpa.
Withnwere ngwaọrụ nwere obere ngwaọrụ na batrị dị na mpụga ịnabata ngwaọrụ ahụ. Get nweta ndị nke batrị wuru n'ime isi unit. N'ihi ya, ha dị ntakịrị karịa n'ihi na ịnweghị batrị ahụ ebe ọ bụla ọzọ.
Otu ihe ọghọm bụ na ihe nkwado ahụ n'onwe ya, otu esi etinye ya na mkpara ndị ahụ, nwere nchekwa nke ọma, ma ihe nkwado ahụ na-agbatị na mkpanaka ahụ na nke dị na ọkụ n'onwe ya. Site n'oge ruo n'oge ọ bụ ezi echiche ịlele kposara. Enwere ihe ngosi 4 na nke a ma jide n'aka na ọ na-agbanye ya.
Weta ọkụ ọkụ na okpu. Mgbe ị chọrọ idozi gị igwe kwụ otu ebe, ọ bụ maa mgbe ị na-achọghị ka imefusị ọkụ gị n'ihi na ọ ga-emecha mee. Tinye okpu iji kpoo ọkụ ma jidere obere isi.
Nke a pụtara ihe dị ka £ 5. Ihe niile ịchọrọ idozi igwe kwụ otu ebe bụ ịchekwa ike ọkụ ịlaghachi n'okporo ụzọ. Qukpụrụ nkwanye ụkwụ dị ezigbo mkpa n'abalị dịka ọ dị n'ehihie.
Ugbu a, ọ bụrụ n’inwere ọkụ na-enwu gbaa, na-enwu gbaa, agbakwala ya n’ike zuru oke mgbe ị na-anyara ya na mgbe ị na-aga. Ha ga-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala kpuo ìsì, ọ ga-abụkwa iru ala maka onye ọ bụla. Mgbe ị nwere ọkụ kachasị ike na otu ị na-agba, weta bum gị n'elu ngwugwu ahụ.
Ikwesighi ịnọ n’azụ ngwugwu n’ihi na ị ga-ebibi ya maka ndị ọzọ. Emeela m nke a n'amaghị na mbụ. Y’oburu n’inwe ezigbo onodu ike igba ugboala gi, i n’eme otutu onyunyo ojoo n’iru ndi nile inya ugbo ala n’iru gi ma mebie ihe nile.
N’ikpeazụ, ikekwe ihe kachasị mkpa, emebila ọhụụ abalị nke enyi gị site n’ile ha anya ozugbo na-eyiri isi mkpuchi isi. Ejiri n'elu ogwe aka ma ọ bụ tinye n'elu okpu agha ahụ? Nke ahụ bụ ajụjụ afọ ochie. Ọfọn, na ụwa zuru oke, ịchọrọ onye ọ bụla.
N’ezie ọ dị oke ọnụ. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere naanị otu, aga m akwado ịkwado nhọrọ maka ogwe osisi. Nke a ga - enye gị jet kachasị mma.
Nwere ike iyi ọkụ dị ike na igwe gị karịa ịkpu okpu agha gị maka ịrụ ọrụ karịa. Y’oburu na inwere oriọna n’elu osisi, ichoro ile ya anya dika enwere ike. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike ịga n'okporo ụzọ ọsọ ọsọ ma hụ ihe mgbochi na-abịa.
Ahapụkwala ka isi ọkụ gị dị n’ala ike gị n’ihi na ugbu a ị ga na-ele taya gị anya n’ihi na ọ na-adọpụ uche gị, ịkwụwa aka ọtọ. Ọzọkwa, ị gaghị ahụ ihe mgbochi na-abịakwute gị nke ukwuu. Gbaa mbọ hụ na ị na-atụ aka opekata mpe 9 m n’okporo ụzọ.
Ọ dabere n'otú ìhè gị si enwupụta na ike o nwere. Ike ka ìhè ahụ dị, ka ị na-agbadata ala ịnwere ike ịnweta nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ ahụ iji mee ka ihe niile dị elu. Agbanyeghị, enwere ọghọm ole na ole n'iji naanị ọkụ eletrik na-arụ ọrụ.
Nke mbụ bụ mgbe ị na-anya ụgbọ ala, ebe gbagọrọ agbagọ, ị ga - enweta obere ntụpọ ojii nke ị na - enweghị ike ịhụ. Oge ụfọdụ ị nwere ike chọọ ịnweta ọkụ okpu agha iji nyere aka belata nke a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị gafere ụgbọala kpuru ìsì wee banye n’olulu oghere na ihe ndị yiri ya, ị ga-ejedebe ebe ndị ìsì ọzọ na-atụ ụjọ ma ọ bụ pụrụ ịbụ ihe na-atọ ụtọ, dabere n’otú ị si akwọ ụgbọala.
Isi okwu a bụ na n'okporo ụzọ nwere ọtụtụ ngalaba na-agbanwe agbanwe, ịgaghị ahụ ụzọ n'oge. Emechiela m onwe m ugboro ole na ole n'ime afọ. Aga m ejikwa okpu okpu.
Agbanyeghị, ịnweghị ike iji naanị ọkụ mkpuchi otu oge, n'ihi na ha anaghị adịkarị ike iji nweta ọtụtụ n'ime ha n'onwe ha. Ha agaghi adi ogologo oge. Ha nwekwara ọghọm ọzọ.
Ihe gbakwunyere, n'ezie, bụ eziokwu na ị nwere ike ile anya ebe ọ bụla. Ebe ọ bụla ịlere anya, ìhè dị. Ebumnuche maka ihe ndị ahụ e ji mara tebụl ebe ọgbakọ pole bụ onye emeriri.
Ha dịkwa ezigbo mma n'ihi na ị nwere ike ịhụ n'okpuru ihe na karịa ihe, maka ụfụ kpuru ìsì, mana anya gị ga na-awagharị mgbe niile n'abalị. Ọ nwere ike ịbụ ihe ngbanwe na ntakịrị ntakịrị oge. Chọrọ n'ezie ijikọta ha ma gbanye ọkụ okpu agha gị mgbe ịchọrọ ya.
Dị ka ogwe aka ejiri ọkụ, debe ha n'ike dị ala ma mee ka ha sie ike ka ị na - ahụ maka usoro teknụzụ na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ọkụ gị gbaa ọsọ. Ebe ahu ka ino.
Nke a bụ GMBN Tech Guide for Night Driving and Lights. Ichikota ya, echefula bear nke kacha nta maka ịnya ụgbọ ala. Chọrọ n'ezie 1,000 lumens ma ọ bụ karịa.
Dị ka o kwesịrị, ị chọrọ ọkụ ọkụ eletrik, ma ọkacha mma obere, obere ike, okpu agha. Na-ebu ngwa ngwa mgbe niile. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ọ ga - abụrụ gị ihe mgbe niile, wee kwụsị ịchekwa pennies ndị ahụ nke ọma ma tinye ego na ọkụ dị elu n'ihi na ha ga - eme ya ihe ịtụnanya.
Nke ahụ pụtara na ịnwere ike ịkwọ ụgbọala n'otu ụzọ ahụ n'afọ niile. N'agbanyeghị ọnọdụ na ọkụ. Ọ dị mma, ka anyị mee ya obi ụtọ.
Were nọ ebe a. Ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru. Ruo oge ọzọ.
Kacha lumens ole ka m chọrọ ịgba ịnyịnya?
Na-ekwu ihe ọ bụla karịrị 500lumenskwesịrị ịdị mma maka njem na-aga ebe ebe ọkụ na-enwu n'okporo ámá. Ihe ọ bụla karịrị 1000Ogherekwesiri inye gi ọhụhụ zuru oke iji nye gị ohere ịgbago ọsọ ọsọ n'okporo ụzọ na ụzọ adịghị agagharị n'ihi na ọ ga-enye gị amụma zuru oke iji nwee obi ike.June 1. 2021 g.
Will ga-akwọ ụgbọala n'ọchịchịrị, ịchọrọ ọkụ. Ma olee ọkụ ị chọrọ? Echere m, enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche n'ebe ahụ, site na pound ole na ole ma ọ bụ dollar ruo ọtụtụ narị narị ego gị, na isiokwu a, m ga-akọwa ụdị ọkụ dị iche iche, ọrụ dị iche iche dị na ha na ihe ha ha na ha nọ Ọ kachasị mma ka ị kpebie ụdị ọkụ ị ga-achọ ịnya, mana tupu m mee, gbaa mbọ hụ na ị debanyere aha na GCN ma ọ bụrụ na ịnweghị, ma pịa akara mgbịrịgba ahụ iji nweta ọkwa dịka nke a ga - enyere gị aka kwado ọwa na ọdịnaya anyị mepụtara. (Uptempo house music) Nke mbu, anyi na akwado mgbe nile ka I jiri: O pekata mpe oku abuo.
Uhie na azụ na-acha ọcha. N'ezie, nke a bụ ihe iwu chọrọ n'ọtụtụ mba, mana agbanyeghị, naanị ya na-echebe gị. Ekwuru m na ọ dịkarịa ala abụọ n'ihi na m ga-akwado ka ị jirikwuo, ma enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a.
Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ọkụ gị apụ ma ọ bụ batrị gị apụ, ị nwere nkwado ndabere, nke abụọ bụ n'ihi na ọ ga-eme ka ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ hụ gị wee nwekwaa nchekwa. Ihe ọzọ ikwesiri ịma bụ, na ọkụ ụzọ ihu na-ekewa ụzọ abụọ, ọkụ a ga-ahụ na ọkụ iji hụ. A naghị eji ọkụ azụ ọkụ maka ịhụ igwe kwụ otu ebe n'ihi na m na-ekwu na ọ dịghị onye na-agbagharị azụ na igwe kwụ otu ebe. (Mkpọtụ) mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ, mkpọtụ. (Beep) Mgbe ị na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ na-enwu gbaa na obodo ukwu, ọkụ zuru ezu nke na-enye ndị ọzọ ohere ịhụ gị, dị ka nke a.
Ha anaghị egbuke egbuke, mana ha adịghị ọnụ ala karịa oriọna dị ike nke na-enwu ụzọ gị n'okporo ámá ndị na-adịghị mma. Ma olee otu i si mara ka ìhè si enwu? A na-eji SI unit nke lumen tụọ etu ọkụ si enwu ma a na-edekarị ya na akụkụ igbe ahụ, mana 'gịnị bụ lumen?' Anurum ka i na-aju. Ugbu a.
Lumen bụ ewepụtara SI unit nke luminous flux, nke bụ ọnụọgụ nke ìhè a na-ahụ anya nke sitere na isi mmalite enyere site n'otu nkeji oge. Mgba ọkụ na-enwu dị iche na nke na-enwu enwu n'ihi na nchapụta ọkụ ahụ bụ ọkụ niile na-enwu n'ogologo niile, ebe ọkụ na-enwu gbaa dị n'ogologo nke anya mmadụ na-ahụ. Na lumens na-ezo aka na luxin na otu lux bụ otu lumen kwa mita mita.
Ugbu a ị maara. Ọfọn, iji tinye nke a n’ime ya, ọkụ ihu igwe na-abụkarị ọkụ ọkụ 1,200. Igwe ọkụ ọdịda nke ụgbọelu na-ere ọkụ gburugburu 5,500 lumens na akara bat bụ 525,000 lumens.
Yep, enwere m nnukwu obi ụtọ na nnọkọ. N'ihe banyere ọkụ igwe kwụ otu ebe, ha na-adịkarị n'etiti 50 na 2,000 lumens. Seeinghụ ọkụ na-adịkarị n'etiti 50 na 200 lumens.
Enwere m ihe atụ ole na ole ebe a, yabụ na nke a bụ ihu nke CatEye, na azụ m nwekwara azụ ọkụ nke dị ihe dịka 50 lumens. (Uptempo house music) Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala na unlit okporo ụzọ mgbe ahụ, m onwe m ga-akwado ma ọ dịkarịa ala ihe gburugburu 800 lumens akara obere na-enwu gbaa, ma n'ikpeazụ ka ị na-ahụkwu ka ị ga-enwekwu obi ike na obi ike karịa ka ị ga-enwekwu obi ike na obi ike. Nke a CatEye Volt dị mma, 800 lumens, ọ na-ekwu 800 n'akụkụ.
Ọ bụrụ na ị na-apụ n'okporo ụzọ, ị ga-achọ ọbụlagodi ndị na-enwu gbaa, malite na opekata mpe akara lumens 1,000 ma na-arịgo. Yabụ nke a bụ Topeak Cubi, ihe dịka 1,200 lumens. Na CatEye Volt a, ihe karịrị 1,600 lumens na nke a.
Ma kpachara anya, ọ bụrụ na ịnwere ọkụ dị ike, gbanye ya n'okporo ụzọ na mgbe ụfọdụ gaa n'ọnọdụ dị ala dịka ụfọdụ ọkụ ọkụ ụgbọ ala dị na ọkụ ọkụ 1,200 lumens. Chọghị ikpu onye ọkwọ ụgbọ ala nke ụgbọala 18-Mack na-abịakwute gị na 60 mph. Ya mere, ihe ị ga-achọ na ọkụ.
Mbụ, ụdịdị na-egbu maramara na ụdị dị iche iche maka ọkụ ọkụ. Ndị a bara uru ugbu a n'ihi na mgbe ị gbanwere na ncha ọkụ, batrị ga-adị ogologo oge. Mgbe ị nwere oke ọkụ na-enwu gbaa dị ka nke a, ịchọghị nnukwu ọkụ na-enwu gbaa oge niile.
Yabụ mgbe ị batara n'okporo ámá nwere ọkụ, ịnwere ike ịgbanwe gaa na-egbu maramara ma chekwaa batrị gị. (Uptempo ụlọ egwu) Nzipụta nke usoro ọkụ. Chọghị ka a hụ gị n’ihu ma kwụ ọtọ site n’azụ.
Ọzọkwa, tụlee ọkụ nke na-enyekwa ọhụhụ akụkụ, ma ọ bụ tụlee ịgbakwunye ọkụ ndị ọzọ na-enye ụfọdụ nchapụta site n'akụkụ. Nke a bụ n'ihi na ọ jọgburu onwe ya, mana ọtụtụ ihe mberede na-eme na ntanetị ma nke a dị mkpa. (Uptempo ụlọ egwu) Ọ dịkwa mma ịmara na mba ụfọdụ nwere mmachi siri ike na ọkụ ịnyịnya ígwè na-adabere n'ụkpụrụ cone ọkụ.
Germany na-echeta nke mbụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ejighị gị n'ụkpụrụ ụfọdụ nke iwu kwadoro, ụfọdụ emebere ya n'ụzọ ga-eme ka ọkụ ahụ dị anya iji hụ ụzọ ndị na-adịghị n'okporo ụzọ. Ọzọkwa, ha nwere ike iju ndị ọrụ na-abịa n'okporo ụzọ anya.
nkwụsị na-ebu ọnụ oge niile
Ọkụ ahụ nwere ụkpụrụ ọkụ nke emere na ụgbọ ala ma nye gị ohere ịmegharị ọkụ ọkụ na ntinye nke bọtịnụ, nke nwere ike ịba uru n'okporo ámá ndị na-adịghị mma. (Uptempo ụlọ egwu) Ọkụ kachasị ọnụ ala na-enwekarị batrị ndị edochiri edochi. Mana mụ onwe m ga-akwado ịzụrụ nke nwere batrị USB.
Nke a pụtara na o yikarịrị ka ị ga-ejide gị na-aga n'ihi na ị nwere ike ịgba ya ụgwọ n'ọrụ ahụ ma hụ na ọ dị ihe ọ juiceụ juiceụ mgbe niile, yana mgbe ha na-eri obere ihe karịa iji malite, ha na-enweta ọnụ ahịa karịa oge ha anaghị anọ ' t niile mkpa ka ịzụta batrị ọhụrụ. (Uptempo ụlọ egwu) (keyboard na-akụ) Ndụ batrị. Ugbu a buru ibu, ọkụ ndị dị oke ọnụ na-enwe nnukwu batrị ma na-adịru ogologo oge, yabụ gbaa mbọ hụ na ịhọrọ ọkụ nke nwere batrị zuru ezu maka njem ị na-eme atụmatụ, ma bụrụkwa ogologo.
Nke a bụ ọkụ Topeak CubiCubi dị ezigbo mma maka na ọ nwere batrị dị iche iche ị nwere ike wepu, ọ na - abịa na nha dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na ị ga - apụ mgbe ị ga - apụ, ị ga - enwe ike ịlele dynamo n'ihu hub, nke na - ewepụta ọkụ eletrik site na ngagharị nke ihu ihu gị ma na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nwee ike ọkụ ụfọdụ mara mma mgbe ị na-agba ịnyịnya. (chilled hip-hop) music Nhọrọ nhọrọ, ya mere ọkụ nwere ike itinye na igwe kwụ otu ebe n'ụzọ dị iche iche.
Twozọ abụọ a na-ahụkarị bụ nke nwere eriri roba dị ka ndị a ma ọ bụ na brackets dị ka ndị a. Na nke kachasị, ịchọrọ ọkụ nke dị mfe iwepụ ma gbanyụọ n'ihi na mgbe ị na-ebugharị ya, ị chọghị ịhapụ ọkụ gị na igwe kwụ otu ebe ka ị na-aga ọrụ n'ihi na ndị achọghị, ndị rụrụ arụ nwere ike zuo ya mgbe i jiri ya bido. (Beep) (egwu egwu a na-enyo enyo) Beingdị mfe iwepụ ma dochie bara uru maka iwepụ ya mgbe ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ya.
Mgbe ị na-ahọrọ ugwu, họrọ nke dị mma nke ga - enyere aka ijide ya n’aka ike bụ ihe na - akpasu iwe n’ihi na ọ na - ewepụta mgbe ọ na - anya ụgbọala. (Chilled hip hop music) Enwere ọtụtụ nhọrọ ọkụ dị ugbu a. My saddlebag ọbụna nwere ọkụ wuru na ọ mara ezigbo mma maka ọhụhụ akụkụ kwa, na-afanyekwa ya.
Kedu ka nke ahụ si dị mma? Ihe ikpeazụ ị ga-atụle bụ ebe ị ga-arịgo ọkụ na ụdị igwe kwụ otu ebe ị ga-agagharị iji jide n'aka na ị ga-enweta igwe kwụ ọtọ. Ọmụmaatụ, ọtụtụ ọgbara ọhụrụ ọduọ anyịnya igwe nwere ọmarịcha aerodynamically ekara handlebars na oche posts, nke nwere ike ime ka arịgo ọkụ ọdịnala dabere na gburugburu aka ma ọ bụ oche post nsogbu. Ọ dabara nke ọma na enwere ọkụ na-arụ ọrụ ebe ahụ, m na-atụ aro ka ị jiri ihe nwere eriri roba na-agbatị dị ka nke a n'ihi na nke a adabaghị adaba maka ịrịgo na post.
Ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ ugwu na ihe cam -Style kpebie dị ka nke a na topeak ìhè m nwere ebe a n'ihu. Kedu ụzọ ọ bụla, enwere ngwaahịa dị iche iche. Naanị jide n'aka na ị họrọ ihe na-arụ ọrụ maka igwe kwụ otu ebe.
Nnenne, achoro m na ihu a igwe eletrik anya bara uru ma enwere m olile anya na imutara ihe. Ọ bụrụ otu a, biko nye aka edemede a .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ụlọ ahịa GCN wee jide otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịme.
Ihe kacha amasị m, nke mmiri na ọcha, dị na ngwaahịa. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ edemede ọzọ gbasara dynamo Hubs pịa ebe a.
Ndị igwe kwụ otu ebe dị mfe karịa?
Ugwuigwe kwụ otu ebe, dị ka aha ya pụtara, gụnyere ọtụtụ ịnya ugwu na ịrị ugwu. Oge ọ bụla ị gbagoro, ị na-arụ ọrụ megide ike ndọda. AMkpa ọkụ igwe kwụ otu ebega-eme ka nrịgo dị mfe. Mgbe ị na-ala azụ, obere ibu nwere ike ịhapụ gị brek na nkwusioru ịrụmma.Eprel 11 2013
Ugbu a, ọ dịwo ogologo oge ị na-agbanye n'ahịa maka igwe kwụ otu ebe na ọkụ na-acha ọkụ ọkụ nke a maara na ọ ga-agbatị tankị, ma igwe kwụ otu a dị arọ ọ ga-erite uru n'ezie ma a bịa n'ịgbadata ọzọ? Ọfọn, ya mere taa anyị ga-ele anya ntakịrị site n'ịgbakwunye ibu na ime ule ụfọdụ na igwe kwụ otu ebe iji hụ etu igwe kwụ ọtọ na-atụnyere igwe kwụ otu ebe na ikpe ahụ. (Obi ụtọ dị ụtọ) Ọ dị ka ịnya n'elu akwa mmiri. (Obi Musictọ)) Ya mere, tupu anyị amaba na mmiri, ka anyị kwatuo obere obere jargon taa.
Ugbu a, anyị ga-ekwu maka ọtụtụ mmadụ na ndị a na-akọwaghị. Ihe abụọ a ga - emetụta arụmọrụ nke igwe kwụ otu ebe gị, ọkachasị nkwusioru. Ma gịnị bụ hel? Ka anyị chọpụta.
Na nkenke, a na-ewepụ ihe ndị ahụ na-emetụtaghị nkwụsịtụ, gụnyere ụkwụ ndụdụ, wiil, taya, na rotors. Featherweight ahụ gụnyere ihe ndị ọzọ niile metụtara nkwụsị. Nke ka n ’onodu ogha n’iru nke buru ibu karie ka akuputara ya, ka ogha n’iru.
Gba ọsọ ahụ ga-adị obere ma pere mpe ị ga-enwe mmetụta ya n'okporo ụzọ ndị a siri ike karị. A ezi ihe atụ nke a bụ ma ọ bụrụ na ị na mgbe nọkwasila e-igwe kwụ otu ebe, ndị ụdị batrị ndị ọzọ na mmezi ibu ndị dị na ndị a na-eme ka a ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na fọrọ nke nta ka o yiri ka a bit kwa gburugburu nzọ ụkwụ ezigbo. Ya mere, anyị ga-anwa ịgbanwe sprung ka unsprung uka ruru iji hụ mmetụta ọ nwere na ụzọ ụkwụ site na ịtinye igwe dị iche iche.
Mana echere m na ọ bụ oge anyị mere. Ka anyị laghachi na ụgbọ ala ahụ. (Joy music) Ka anyị leba anya na ntọala taa.
Ọfọn, ụmụ nwoke n’oge gara aga anwalela itinye ịdị arọ n’elu igwe kwụ otu ebe, ụmụ okorobịa dị ka Chris Porter na ndị ọzọ. Tried gbalịrị itinye igwe gburugburu ala nke nkwado mgbodo ahụ ma dịkwa elu na azuokokoosisi ahụ. Maka nnwale taa, anyị ga-anwale ma ha abụọ.
Iji mee ka ihe dị ka ihe ziri ezi ma dị mfe dị ka o kwere mee, anyị ga-eji otu igwe kwụ otu ebe. Enwere m chernobyl ebe a. Anyị ga-eji obere igwe ndị a na ntọala mbụ anyị.
Ugbu a ha bụ gram 500 nke ọ bụla, anyị nwere anọ n’ime ha, yabụ kilo abụọ dị arọ karịa, nke anyị ga-etinye n’okpuru mpaghara nkwado ahụ ma dịkwa nso na azuokokoosisi iji nwalee sprung uka nke abụọ dị nro, anyị ga-achọ igwe ọzọ. Ka anyị lee ihe anyị ga-enweta. Oh zuru oke, amaghi m ebe ha si.
Ya mere, nke a bụ nke abụọ anyị wiil, ha dị obere dị iche iche wiil mana ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na agbakwunyela ndị rotors ahụ, anyị hapụkwara taya ahụ otu ihe iji belata esemokwu, naanị ihe dị iche bụ na ndị a bụ ihe dị ka kilogram abụọ mmiri na-agbasa n'elu ụzọ ahụ, nke ahụ dịkwa ọtụtụ na mbara igwe na-adịghị mma iji kpochapụ ma jupụta n'okporo ụzọ ahụ. Ọ ga - abụ ihe na - atọ ụtọ ịhụ etu nke ahụ si) Kwesịrị ịbụ ihe ọchị. Ugbu a bụ oge iji nweta nọmba niile dị mkpa ma tụọ ntakịrị, mana maka nke ahụ, anyị chọrọ igwe kwụ otu ebe, ah, zuru oke. (Joy music) Ihe mbụ e jiri atụ ya bụ igwe kwụ otu ebe n’enweghị igwe ndị ọzọ, a gbanwere ya kpamkpam, yabụ ka anyị gaa lee ihe anyị nwere. (Flaue Musik) Dịka ị pụrụ ịhụ, na-agbakwunyeghị ibu ọ bụla na ibu ahụ, anyị gbakwunyere nkwado ala ma gbanye ihe karịrị kilogram abụọ, gụnyere eriri na igwe kwụ otu ebe. (Joy music) Ugbu a maka ntọala nke atọ anyị, nke ahụ na-enweghị ụkwụ dị arọ.
Ya mere, ka anyi mee ka ọ buru ihe-ọtùtù ma hu ihe-ọtùtù-ya. (Egwú egwu) Ya mere echere m na m ga-awụnye kilogram abụọ na wiil. Ọ tụgharịrị na ma eleghị anya, m tụrụ ihe na-ezighi ezi ma ugbu a, enwetara m kilogram atọ na ọkara nke mmiri, nke bụ naanị ihe na-atọ ụtọ m na-eche.
Cool, ya mere ọ bụ oge ule. Iji mee ka ihe dị mma ma ọbụlagodi dị ka o kwere mee, anaghị m agbanwe nrụgide taya na nke ọ bụla n'ime wiilị ahụ. Ma ntọala m kwụsịtụrụ bụ ndị m ga-esokarị, anaghị m agbanwe ihe ọ bụla na mgbakwunye, nke ga-abụ ihe na-atọ ụtọ.
Ya mere maka ule mbu anyi na-agba ezumike na ihe ima aka. Ugbu a, m ga-amalite n'ugwu ahụ wee gbadata na ọsọ ọsọ ochie, na-edebe otu ọsọ ahụ oge ọ bụla n'egwuregwu m ebe a ma anyị nwere obere protocol dị ka ihe mgbaru ọsọ anyị, anyị ga-abụkwa brekị n'ebe ahụ, Echere m na onye ọ bụla ga-ahụ ogologo oge ọ ga-ewe iji kwụsị, ọ nwere ike ịbụ nnwale mara mma m chere na nke a. (egwu na-ada ụda) Ọ dị mma, yabụ anyị bịara, anyị na - eme 15 mph na woohoo ugbu a.
Anyị brek. Obere ibu na ihu, ma anyị jisiri ya. Ọ bụ ihe ọ bụla nke onwe ya ma lee ihe ọ bụ. (Joy music) Ọ dị mma, nke ahụ bụ n'ezie nnwale na-adọrọ mmasị, dịka ị nwere ike ịhụ na anaghị m akwụsị karịa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na-amasị gị, nke ahụ bụkwa ihe agbakwunyere agbakwunye, na ihe dịpụrụ adịpụ bụ njedebe azụ adịghị ikesiike na n'ihu ihu adịghị na-adị mfe mgbe braking ike.
N'ezie na-akpali ule maka gị, ọzọ aro emeghị ka ọ dị ukwuu mgbe braking. (Joy music) Bilie na ngwa ngwa. Oh mma.
Ọ dị mma, m ga-asị na ịzụrụ otu ihe ahụ dị ka igwe kwụ otu ebe, ikekwe ọbụlagodi obere oge. Na-akpali. Echere m ọzọ na ị nwere nnukwu ibu n'okpuru.
N'ezie jidere na obi ike sere brekị n'ezie ike, mba na n'ihu ọgwụgwụ ga-asa, na azụ ọgwụgwụ bụ n'ụzọ ụfọdụ n'okpuru akara, ọ bụ ezie na ekemende. Nnọọ na-akpali nnọọ mmasị ule. Ee jụụ.
Ọ masịrị m. Oge maka ule nke abụọ na nke a bụ nsogbu ịrịgoro ugwu. Ya mere, na ntọala atọ niile dị iche iche, yabụ anyị ga-amalite ebe njedebe njedebe anyị bụ maka ule nkwụsị anyị ma anyị ga-arịgo 100 mita ruo mgbe mbadamba ahụ dị, echere m na ị ga-ahụ ha.
Lelee nke ga - abụ nwayọ nwayọ, ma ọ bụ ozugbo ọ malitere, ọ ga - adị mma, echekwara m na nke a nwere ike mepụta ụfọdụ ọnụọgụ na-atọ ụtọ. (egwu na-ada ụda) Atọ, abụọ, otu, na-aga. (upbeat music) Woohoo Ugbu a, nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, na - agba ọsọ.
Na-enwe mmetụta dị mma nke mere na echeghị m na mods nwere ike iti ihe ahụ. (upbea t music) ato, abuo, otu. (Obi ụtọ na egwu) Oh chim, mana ị nwere ike ịnwe mmetụta ọzọ nke na-abịa n'ahịrị ma ọ bụrụ na ị ga-aga.
Na-eme nnukwu ihe dị iche, mana echere m na anyị dị mma. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Ọ dị mma, ọ dị mma, oge ule ikpeazụ, mmiri na wiilị, ọ ga-adọrọ mmasị. Ka a pụọ.
Odi, ato, abuo, otu. Okpokoro zuru ezu site na mmalite echere m na anyị chọtara unsprung uka nke ikiri ụkwụ Achilles, nke ahụ pụtakwara na ọ ga-eme ka ọ gaa na ule ikpeazụ, nke m chere nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ma nke ahụ bụ ezigbo ule.
Ugbu a, anyị nọ ebe a, anyị nwere ihe dịka otu mgbada nkeji. Anyị ga-anwa atọ anyị niile na-agba mbọ na ya ma jiri ọnụ ọgụgụ tụnyere ya, mana echere m na ọ bụ ebe a ka ntọala abụọ ahụ dị nro nwere ike ibute ma nwee nnukwu mmetụta na ịnya ụgbọ ebe a. (upbeat music) WoohooOkay mere m mechara ngwụcha nke abụọ m iji nwee ike ịnwekwu nkwusioru yana dịka ọdịiche pụtara ìhè ọ na-adị nke ọma ma kwụsie ike mana n'ụzọ m ga-esi kwenye na ọ bụ nkịta ka e nye ya ibu ibu na-arị ugwu. (obi ụtọ na-atọ ụtọ) oh chim dị ka ịnya n’elu akwa mmiri (egwu obi ụtọ) oh chukwu m Ọ na-adị ka m na-agbago, ya onyenwe m, a bụ m, m ga-anwụ. (egwu dị egwu) Ya mere, nke ahụ bụ njedebe ikpeazụ anyị na obere ọsọ anyị na-agba na mmiri na igwe kwụ otu ebe.
Ya mere ndi mmadu ndi ozo adighi. Ekwesịrị m ikwu eziokwu, ọ bụghị ọtụtụ ọchị. Ọ dị ka m nọ n'elu akwa mmiri, ọ dị ya ka ọ dị egwu na ọsọ ọsọ n'ihi na mmiri, ike ikuku, fọrọ nke nta ka ọ gbanwee igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ ruo n'akụkụ.
O mekwara ka o sie ike ijikwa igwe kwụ otu ebe. Ya mere, echere m na enwere ike inwe ihe gbasara ịnwale ọnụọgụ mmiri. Ma ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ maka ule a. (ọchị) Ma anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị mma.
Ya mere, echere m na ugbu a bụ oge iji tụgharịa ya n'ime ụlọ ahụ, gbawaa ụfọdụ nọmba, wee hụ ihe anyị nwere. Ya mere, anyị abịaghachila ebe a na ụlọ na nwata, emeela m ọtụtụ nọmba. Ya mere, buru ụzọ ka anyị lelee ịdị arọ igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a igwe kwụ otu ebe m, enweghị ibu na ya, dị ka ị hụrụ ya, 14 na ọkara kilos, ọ bụrụ na anyị kee eriri ndị ahụ, ntakịrị karịa kilogram abụọ, nke mere na ọ bụ 16 na ọkara. Ugbu a na mmiri, nke ahụ bụ mmụba kasịnụ sitere na 14.5kg, igwe kwụ otu ebe m gbagoro na 18.06kg, yabụ nnukwu ọdịiche dị arọ nke m chere ga-eme nnukwu mgbanwe mgbe m na-arịgo, nke ahụ bụ n'ezie.
Ya mere nwalee otu, nke ahụ bụ ihe ịma aka braking anyị. Ugbu a, na-akpali mmasị, igwe kwụ otu ebe, nke bụ igwe kwụ otu ebe m na-emepụta, jisiri ike kwụsị ụkwụ 18 na ọkara. Bikegbọ ịnyịnya ígwè ahụ nke na-adịbu ihe dị mkpirikpi bụ ụkwụ 22 nke wiil ndị ahụ.
Site na mgbakwunye agbakwunyere enwere ọtụtụ nkwụsi ike. Ya mere, ihu nke mbụ anaghị asacha wiil azụ, ọ na-achịkwa ya ma nwee ike idobe ya nke ọma na ala ma ka mma na brekị.
Ya mere mara mma na-akpali, ọ bụ ezie na m ka na-eche ma ọ bụrụ na ị ọgbaghara gburugburu na a ibu nwere ike ịbụ na ị nwere ike ịhụ a bit nke a ụtọ ntụpọ. Nwale abuo ma nke ahu bu nsogbu anyi n’ile. Ugbu a, ngwaahịa m na-arịgo n'ebe anyị setịpụrụ na nke ọ bụla n'ime 7.7 sekọnd, igwe kwụ otu ebe abụọ ANYun bounced this weight 8.2 sekọnd, ya bụ ihe dị ka 0.5 nwayọ nwayọ.
Echere m na nke ahụ ga-abụrịrị na ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe karịa. Na-akpali mmasị, igwe kwụ otu ebe atọ, n'ihi ya, anyị dị arọ wiil ndị ọzọ 0,5 sekọnd iji nwayọọ.
Ya mere, n'ozuzu zuru nke zuru nwayọ karịa ihe na-erughị 10 sekọnd bụ nnukwu oghere. Ihe kpatara nke a na-amalite site na nnabata nnabata dị ukwuu, ọ dị nwayọ nwayọ ma wee laa ọsọ ọsọ. Enwere ike dị ukwuu na ya iji mee ka ọ gaa ma mee ka mmiri na-atụgharị.
Ozugbo o biliri ime ngwa ngwa ọ dị mma, mana na-enweghị eriri, ọ bụ obere nkịta, yabụ nke atọ na n'ikpeazụ anyị nwere nsogbu ịma aka e.Ugbu a anyị edeela ụzọ ụkwụ a maara nke ọma, nke m ' edeela ọtụtụ ugboro. Echere m na ọ dị ihe dị ka nkeji oge, ọ dị obere karịa, dị ka sekọnd 42-38.
Bike kwa, ya mere nke a bu ihe ozo nke nwere otutu ihe gbara ososo ya na ukwu ya, ya bu 41 sekọnd. Ugbu a, ihe na-adọrọ mmasị n'ebe a, n'agbanyeghị na ọ dị sekọnd atọ nwayọ, igwe kwụ otu ebe na-enwe mmetụta nke ọma karị ma na-achịkwa mgbe ị na-eme ihe na-adịghị mma. Yabụ n'ezie na ọ mere nnukwu ọdịiche ebe ahụ.
Echere m na igwu gburugburu na ibu nwere ike ịchọta ebe dị ụtọ na nke ahụ, echekwara m na nke ahụ nwere ike bụrụ nke kachasị dị irè na wiil anyị dị arọ na-enweghị atụ, 46 sekọnd, dị nwayọ nwayọ. Ihe kpatara nke a abụghị nke kachasị na ngalaba a nke ụzọ ọ bụla, mmetụta nke na mmiri dị ukwuu sl Ndị agha na-agagharị na ndị na-ehi ụra emeela ka igwe kwụ otu ebe ghara ịdị jụụ, ọkachasị n'ikuku, ya mere 46 sekọnd. Yabụ ngụkọta nke sekọnd asatọ nwayọ nwayọ, nke bụ nnukwu oge n'oge dị mkpirikpi.
Ọ dị mma, yabụ ka anyị chịkọta ihe anyị mụtara. Ọfọn, igwe kwụ otu ebe m, a na m ejikarị ya agbasi ya ike ma ọ gaghị eju anyị anya na ọ na-arị elu oge ọ bụla. Ihe dị ịtụnanya bụ ebumnuche na-agbakwunye na-agbakwunye ibu na azuokokoosisi na ala nkwado, ihe ndị dị ka nke ahụ.
Echere m n'echiche na enwere ihe ọ bụla. Echere m na ọ bụrụ na iji ọnọdụ na ịdị arọ gwọọ gị, ị nwere ike ị nweta elele site na ịmela ụmụ gị, m na-akwụwa aka ọtọ, enwere mmetụta ọfụma ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ na-adọkpụkarị, ị na-aga nwayọ nwayọ, ọ na-esi ike karịa n'ihi na o doro anya na ị na-ebuwanye ibu.
Mana iji chebe m, echere m na ibu ahụ nwere ike nwere ọtụtụ ikike dịka o doro anya na ọtụtụ mmadụ anwalela tupu oge a, n'agbanyeghị ebe ị na-agagharị na oke ibu ị na-etinye, mgbe ị nwere oge igwu a miri emi miri emi nkwusioru na obibi taya ike, Echere m na ị pụrụ n'ezie ịchọta ihe ezigbo Mbido. N'ozuzu, M na-eleghị anya, na-edebe m igwe kwụ otu ebe, M ga-agbakwunye ọ bụla igwe n'oge ọ bụla dị ka ọ bụ ihe ụbọchị niile nzọ ụkwụ bike na dị nnọọ eburu mmezi ibu. Daalụ maka ilere edemede a.
Enwere m olile anya na ị bara uru. Ma ọ bụrụ na ị nwere nkwupụta ọ bụla ma ọ bụ gbalịa itinyekwu arọ na igwe kwụ otu ebe gị, mee ka anyị mara na nkwupụta ahụ, nke ahụ ga-adị mma ịnụ. Echefula inye anyị isi mkpịsị aka, pịa Idenye aha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ele GMBN naanị pịa isiokwu ugbu a.
Ndi lumens 200 zuru ezu maka ịgba ígwè?
Ihe ọ bụla karịrị200 lumensga-enwe ike ịkwanye ụzo n'okporo ụzọ ma nyeezuọkụ ị ga-aga n'okporo ụzọ ndị na-adịghị agba agba na ụzọ, na-agba ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ala ahụ nwere ike ịdị njọ, ma ọ bụ na ị ga-enweta ihe ọghọm n'okporo ụzọ, mgbe ahụ ị nwere ike chọọ ihe na-egbuke egbuke.Sep 16 2020
1000 lumens na-enwu gbaa maka MTB?
Ruo ugbu a ị naghị aga ngwa ngwaezuebe ị na-aga na-agba ọsọ gị doo. Ọ bụrụ na ị ga-agbada steeper ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ wee debe onwe gị na1000 ọkụìhè maka aka. Ga-aga ngwa ngwa karịa ka ị ghara ịmị ọkụ ọkụ.
1000 lumens zuru maka ịgba ịnyịnya abalị?
“Anyị ụmụ mmadụ nwere ike ịhụ naanị nrịgo ọkụ ụfọdụ.Ogherebụ naanị ogologo nrugharị nke ìhè bara uru kpọmkwem maka ụmụ mmadụ. ” Ọ bụ ezie na ị nwere ikenọkwasina ole na olelumens, Emerson na-atụ aro opekata mpe a1,000-lumenọkụ maka ọtụtụ ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebena-agba ịnyịnya.13bọchị 13 2020
Ndi lumens 1000 na-enwu gbaa?
Ihie nke a1000 LumenMgbukepụ
.B.1000 ọkụtọọchị bụ nnọọenwuna, dabere na oghere ma ọ bụ ngosiputa ngosipụta, dị ikeezuiji ruo ebe dị mita 200 ma ọ bụ karịa. Iji mezuo1000 ọkụ, ọkụ ndị a dị ike chọrọ ike batrị kwesịrị ekwesị iji kwado ọkụ ọkụ.Sep 15 2020
Lnya igwe dị mfe ọsọ ọsọ ọ na-agba ọsọ ọsọ?
N’ezie, o mere mgbakọ na mwepụ ka ọ hụ ka ọsọ onye na-agba ịnyịnya si agba ọsọnwere ikechekwaa na aMkpa ọkụ igwe kwụ otu ebe. Ọbụna na ọkwa kachasị elu ọ nwalere (pasent 7), ọdịiche dị otu paụnd n'etitianyịnya igwenaanị ihe na-echekwa ihe dị ka sekọnd 2,5-na nke kachasịigwe kwụ otu ebenaanị rute n'elu 7.5 sekọndỌsọ ọsọkarịa nke kasị dị arọ.Mar 13 2015
Ihe 400 lumens zuru maka ịgba ígwè?
Enweghi nkwekọrịta doro anya na oleOghereị chọrọ maka aigwe kwụ otu ebeọkụ dị ka ọ na-adabere na ụdị nkeịgba ígwèị na-eme. A ga-ahụ ọkụ ọkụ obodo ga-ahụ n'obodo = 50 ruo 200Oghere. Ime Obodona-agba ịnyịnyaọkụ iji hụ ebe ị na-aga =400ruo 600Oghere. Nzọ ụkwụna-agba ịnyịnyaọkụ iji hụ ihe niile = 600 +Oghere.Sep 1 2018
Ugboro ole ka m chọrọ ịgba ịnyịnya ígwè n’abalị?
A ga-ahụ ọkụ ọkụ obodo ga-ahụ n'obodo = 50 ruo 200Oghere. Ọkụ ịgba ịnyịnya ime obodo na-ahụ ebe ị na-aga = 400 ruo 600Oghere. Trail ịnyịnya ọkụ ịhụ ihe niile = 600+Oghere.Sep 1 2018
Kedu ụdị ọkụ ị na-eji na igwe kwụ otu ebe?
Niterider Pro 1800 ga - enyere gị aka ịgbago n'ụzọ ndị ahụ siri ike n'abalị kachasị ọchịchịrị. Ntughari ntachi obi na-akpọ maka ọkụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na-adịgide adịgide nke ga-eme ka abalị gị gbaa ọchịchịrị na-enwu gbaa. Ndị a na-arụ ọrụ ọkụ na-anwale site na ndị ọkachamara ọkachamara. Na 1800 Ikanam lumens, ndị a igwe kwụ otu ebe ọkụ ga-enwu karịa karịa nkezi ọkụ ụgbọ ala.
Kedu ka esi atụpụta ọkụ nke ọkụ igwe kwụ otu ebe?
Asaa n’ime asaa ndị a bụ nke kacha mkpa. A na-amịpụta ọkụ ọkụ igwe kwụ otu ebe na lumens. Ihe ndị lumens dị elu, ka ọkụ na-enwusi. Ọ dịkwa mma ịmara na 'atụpụtara lumens', nke bụ ihe ndị nrụpụta na-etinye na nkọwapụta ngwaahịa ha, tụrụ na ọnọdụ zuru oke.
Enwere ike iji ọkụ MTB dịka tọọchị?
Ọ bụrụ na ịnweghị igwe kwụ otu ebe na mgbe niile, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nọ, ọ nwere ike ịdị oke mma ma ọ bụrụ na ọkụ ugwu gị bụkwa ọkụ ọkụ. Ọtụtụ ọkụ mtb kachasị mma nwere ike iwepu ma nwee ike ịba okpukpu abụọ dị ka ọkụ.